Filtrer les éléments par date : mardi, 01 septembre 2020
Ronono sy sakafo maro vita amin'ny ronono no mihitsoka, ary ahiana ho simba ao amin'ny AAA Andranomanelatra, vokatry ny fanakatonana nataon'ny fanjakana ny orinasa.
Mpiasa maro no tsy afaka hiasa.
Baiko avy amin'ny lehiben'ny Distrika no voalazan'ny fitanana an-tsoratra nataon'ny vadintany ny 28 aogositra 2020, fa tsy anomezan'ny sefo Fokontany Behoririka, Boriborintany fahatelo, Antananarivo Renivohitra "certificat d'existence" ny orinasa AAA Behoririka.
Ny 19 aogositra 2020 tolakandro no nakaton'ny fanjakana ny AAA Behoririka.
mardi, 01 septembre 2020 22:59
Journée mondiale de prière pour la Création.
mardi, 01 septembre 2020 10:24
Fihodinana an’i Madagasikara: Hiala ao Ambato Boeny hiazo an’Antsiranana ry Zoto efa-mianaka
Ao Ambato Boeny hatramin’ny 28 aogositra teo i Zoto sy ireo zanany telo lahy. Nifandimby nampiantrano azy ireo ny olontsotra sy ny Distrika.
Anio Talata maraina izy 4 mianaka no handao an’Ambato Boeny hiazo an’Antsiranana, izay toeram-ponenany.
Araka ny nambaran’i Zoto dia io no hamarana ny dian’izy ireo mihodidina an’i Madagasikara, fa hianatra amin’izay ireo zanany.
mardi, 01 septembre 2020 10:20
Faritra Atsimo Andrefana: Hiverina an-tsekoly ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana
Nanapa-kevitra ny mambran'ny CO Atsimo Andrefana fa averina mianatra ireo mpianatra rehetra hiatrika ny fanadinam-panjakana ny T5, ny T9 ary ny T12 manomboka ny Talata 01 Septambra 2020, ary manaraka tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana tsy hihanahan'ny aretina vokatry ny Covid-19.
Hajaina ny elanelana 1 menatra, Zaza 1 isaky ny dabilio 1. Mitondra aro-vava sy orona ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny mpandraharaha.
Apetraka amin'ny toerana voatokana ho amin'izany ny DLM (Dispositifs de Lavage des Mains) sy savony hanasana tanana rehefa miditra sy mivoaka ny efitranom-panadinana.
Hatao 15 Septambra 2020 ny CEPE ho an'ny Faritany Toliara ; ny 21 Septambra ka hatramin'ny 24 Septambra 2020 ny adina an-tsoratra BEPC.
mardi, 01 septembre 2020 10:16
Tsaratanana: Mirongatra indray ny asan-dahalo
Tsy mandry fahalemana amin’ny asan-dahalo any Tsaratanana tapany avaratra. Nisehoana fanafihana in-droa misesy tao anatin’ny roa andro iny lalana mandeha Croisement iny.
Ny alakamisy maraina lasa teo dia moto roa notafihin’ny dahalo valo lahy mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika. Lasa tamin’izany ny vola sy ny entana rehetra. Ny alin’ny zoma hifoha sabotsy indray dia omby roa no lasan’ny dahalo tao Ambohibola Kaominina Bekapaika.
Ny sabotsy indray dia moto telo niaraka no voarava tamin’iny lalana mandeha croisement iny. Dahalo fito lahy mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nandroba azy ireo.
mardi, 01 septembre 2020 10:09
Marotsiraky - Amboasary Atsimo: Avotra ilay zaza nataon’ny dahalo takalon'aina
Notafihin’ny dahalo ny tanànan’i Sakafia, Kaominina Marotsiraky, Distrika Amboasary Atsimo ny 30 aogositra 2020. Lasan’izy ireo ny omby miisa 124, ary zazalahy kely iray nataon’izy ireo takalon'aina.
Niditra an-tsehatra ny Miramila avy amin’ny ZRPS ALPHA 1 nanao fanarahan-dia vao nahazo fampandrenesana.
Avotra ilay zaza nataon’ny dahalo takalon'aina, ary tafaverina avokoa ny omby miisa 124.
mardi, 01 septembre 2020 10:00
Antsalova - Faritra Melaky: Mandry andriran'antsy ny mponina amin’ny asan-dahalo
Mirongatra ny asan-dahalo any amin’ny Faritra Melaky tato ho ato, indrindra ao amin’ny Distrika Antsalova.
Ny 25 aogositra dia notafihan'ny dahalo ny tanànan'i Bevero.
Lasa ny omby 30, olona iray no maty lavon'ny balan'ireo dahalo, ary olona roa naratra.
Ny 27 aogositra tokony ho tamin’ny 4 ora hariva, notafihan'ny andian-dahalo ny tanànan'Ambalarano, akaikin'i Beraketa amin'ny lalana makany amin’ny Tsingy ny Bemaraha. May tanteraka ny tanàna, lasa ny omby 4. Olona 3 lasan'ireo dahalo natao takalon'aina.
Mandry andriran'antsy ireo mponina manodidina Beraketa sy Ankinajao.
mardi, 01 septembre 2020 09:46
Distrikan’i Morombe: Ediedy Adolphe no depiote mandimby an’ilay nodimandry
Namoaka didy 07-HCC/AR ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana na HCC ny 31 aogositra 2020, milaza fa hita fototra ny fahabagan-toeran’ny solombavambahoaka ao amin’ny Distrikan’i Morombe, Faritra Atsimo Andrefana taorian’ny nahafatesan’i Rakotomalala Lucien, solombavambahoaka IRD voafidy tao Morombe, izay nodimandry ny 17 jolay 2020 rehefa notsaboina tao amin’ny hopitaly miaramila Soavinandriana.
Ny andininy faha-3 amin’io didy no anambaràn’ny HCC fa depioten’i Madagasikara ny kandida Ediedy Adolphe, mpisolotoerana amin’ny lisitra IRD tao amin’ny fari-pifidianana Morombe, Faritra Atsimo Andrefana. Izy zany no handray ny toerana ao Tsimbazaza.
Namoaka didy 09-HCC/AR ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny 31 aogositra 2020 mamerina an-dRtoa Naharimamy Irmah Lucien ho depioten’i Madagasikara. Voafidy tao Toamasina I izy, tamin’ny lisitra « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina ».
Handray ny toerany ao Tsimbazaza i Naharimamy Irmah Lucien, mifarana araka ity didy ity ihany koa ny maha depiote mpisolo toerana an’i Justin Famindra, nandritra ny fotoana naha minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy an’i Naharimamy Irmah Lucien.